Ministirri fayyaa Tuniiziyaa Isiliim Chaakar erga dorgommii gargaarsaa irratti hirmaatanii booda du'an - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri fayyaa Tuniiziyaa Isiliim Chaakar erga dorgommii gargaarsaa irratti hirmaatanii booda du'an
Goodayyaa suuraa Isliim Chaaker ji'oota jahan darb qofaaf Ministira fayyaa ta'an
Ministirri fayyaa Tuniiziyaa fiigicha maaraatoonii hojii tola oltummaa Kaansarii dhabamsiisuuf qophaa'e irratti erga hirmaatanii booda dhukkuba onnee tasaatiin boqatan.
Ministeerri fayyaa biyyattii, Isiliim Chaakar, namni umurii 56, erga meetira 500 fiiganiin booda kufuun hoospitaala humna waraanaa keessatti lubbuun baate jedheera.
Ministirri Muummee Yuusuuf Chaaheed ''obboleessa fi miiltoo hojii'' koo hojii namoomaa boonsaa hojjachaa tureen dhabe jedhan.
Maaraatooniin kun dilbata darbe magaala qarqaraa Nabiwuulitti Kiliinikii daa'imman kaansarii dhukkubsatan gargaaruuf ijaaramuuf qarshii walitti qabuuf kan qophaa'eedha.
Chaaker jijjiirraa kaabinee ji'a darbe taasifameen, muudama ministirummaa fayyaa argatan.
Hojjataa baankii kan turan namni kun, biyyattii waggoota dheeraaf kan bulchan Zaayin al-Abidiin Been Alii bara 2011 angoorraa erga bu'anii booda, Ministira Faayinaansii, Ispoortii fi Dargaggoo ta'uun tajaajilanii jiru.
Mallattoolee Dhukkuba Onnee Tasaa
Dhukkubbii laphee - miira dhiibbaa, gidduu lapheerra dhiphee qabuu yookaan cinquu.
Dhukkubbii kutaalee qaamaa kan biroo - lapheerraa gara irreetti (yeroo hedduu irreen bitaa kanaaf saaxilamaa ta'us lamaanuurra ga'uu mala), boqoo/illee, morma, dugdaa fi garaachatti dhukkubbiin akka deemaa jiru namatti dhaga'amuu mala.
Lafti namaan maruu yookaan of wallaaluu
Miira dhukkubbii yookaan haqqisiisuu
Miira dhiphinaa hammaataa (naasuu tasaan kan wal fakkaatu)
Qufaa yookaan aaduu
Dhukkubbiin laphee yeroo hedduu hamaa ta'us, namoonni muraasni dhukkubbiin salphaa qofti isaan mudachuu mala. Keessumaa dubartoota, namoota gurguddoo fi dhukkuba sukkaaraa warra qaban irratti, al tokko tokko dhukkubbiin laphee tasuma jiraachuu dhabuu mala.